ကီမိုနိုခေတ်က နွေရာသီနဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ အဝတ်အစားတွေကို ဘယ်လိုဝတ်ခဲ့ကြသလဲ? - JAPO Japanese News
ဟူး 12 Jan 2022, 14:28 ညနေ
ရာသီဥတု ၄ မျိုးရှိပြီး၊ အပူချိန်ကွာခြားမှု အတော်လေးပြင်းထန်တဲ့ ဂျပန်။
ဒါကြောင့်လည်း လှပတဲ့ရှုခင်းတွေ မြင်တွေ့ရပေမဲ့၊ ဒီအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ကိုက်ညီအောင် လိုက်ပြီးနေထိုင်ရတယ် ဆိုတာဟာ အတော်လေး ကယိကထများခဲ့ပါတယ်။
နေသားတော့ကျပေမဲ့၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အဝတ်အစားတစ်စုံသာ ဝတ်တာမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်၊ ဂျပန်မှာတော့ 衣替え（ころもがえ）ဆိုတဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ ရာသီတစ်ခုချင်းစီမှာ ဘီရိုထဲက အဝတ်အစားတွေကို ပြောင်းတဲ့ အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ကီမိုနိုခေတ်မှာလည်း ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို စာဖတ်သူတို့သိကြပါသလား?
မူလအစကပင် ကီမိုနိုမှာ ဆောင်းရာသီဝတ်၊ နွေရာသီဝတ် ဆိုပြီးရှိတယ်ဆိုတာ မသိသေးသူများလည်း ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒိုအချိန်ကာလရဲ့ဆောင်းရာသီဟာ ယနေ့ခေတ်အချိန်ကာလထက် အပူချိန် ၅ ဒီဂရီအောက်နိမ့်ပြီး၊ နှစ်စဉ်နှင်းတွေစုပုံကာ၊ မြစ်ချောင်းများ အေးခဲကုန်ကြပါတယ်။ တော်တော်လေး နေထိုင်ရခက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ခဲ့ပုံရပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအဲဒိုခေတ်အချိန်မှာ တစ်နှစ်ကို ၄ ကြိမ်မျှ အဝတ်အစားကို လဲဝတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်မှာ အနောက်တိုင်းအဝတ်အစားကို အစားထိုးဝတ်ဆင်ကြတာပဲမဟုတ်၊ ချုပ်လုပ်ပြီးကီမိုနိုကို မွမ်းမံဝတ်ဆင်လာခဲ့ကြတာကြောင့်လည်း အံ့သြရပါတယ်။
နွေရာသီမှာ အဝတ် ၁ ထပ်သာဝတ်ကြပြီး၊
ဆောင်းဦးရောက်လာတဲ့အခါ အနည်းငယ်အေးလာတာကြောင့် အပေါ်ခံကိုထပ်ဝတ်ဆင်တယ်။
ဆောင်းရာသီမှာတော့ ဝါဂွမ်းကိုထည့်ကာ ပိုပြီးနွေးနွေးထွေးထွေးဝတ်ဆင်ကြပြီး
နွေဦးမှာတော့ ဝါဂွမ်းကိုဖယ်ပြီး အပေါ်ခံထပ်ဝတ်ကြပါတယ်။
မိခင်ဖြစ်သူက တစ်အိမ်သားလုံးစာအတွက် အဝတ်ချုပ်လုပ်ပေးကြတာဖြစ်လို့၊ အဲဒိုခေတ်မိန်းကလေးတွေဟာ အဝတ်အစားချုပ်လုပ်တဲ့အတတ်ပညာကို မဖြစ်မနေ တတ်မြောက်ထားကြရပြန်ပါတယ်။
ဒါဆို ဆောင်းရာသီဝတ်ကီမိုနိုနဲ့ အဲဒိုခေတ်က ဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့ကြသလဲ?
Ukiyoe (အဲဒိုခေတ် ပန်းချီ) များကနေ လေ့လာကြရအောင် …
နှင်းကျတာကိုကြည့်ရတာ အလွန်နှစ်သက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆောင်းရာသီရဲ့အအေးဒဏ်ကိုတော့ ခံနိုင်ရည်မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ နှင်းကျတဲ့နေ့မှာ နွေးထွေးတဲ့ အဆင့်မြင့်စားသောက်ဆိုင်မှာ နှင်းကိုကြည့်ရင်း ဆာကေးသောက်ကြတယ်။ Sumida River မြစ်ထဲမှာ လှေကိုလှော်ခတ်ရင်း သွေးပူစေကာ နှင်းရဲ့အလှကို ကြည့်ရှုခံစားကြတယ်။
ဒါတွေဟာ အဲ့ဒီအချိန်ကလူချမ်းသာတွေရဲ့ စည်းစိမ်ခံစားမှုတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းရာသီဝတ် အဆင်လှလှ အထပ်ဝတ်တွေကို ဘယ်လိုတွဲဖက်ဝတ်ကြသလဲ ဆိုတာကလည်း အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အအေးဒဏ်ကိုကာကွယ်ဖို့ တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ဝတ်ဆင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့၊ ထပ်ဝတ်တဲ့အရောင်ဟာ လေသံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့အတွက်၊ ယနေ့ခေတ်ကနေကြည့်ရင်လည်း ဖက်ရှင်ကျကျ မြင်ရပါတယ်။
ဒီဇိုင်းနဲ့ကာလာအမျိုးမျိုးကို ထပ်ဝတ်ထားပေမဲ့၊ အပေါ်ဆုံးမှာ အမည်းကိုထပ်ဝတ်ထားခြင်းဖြင့်၊ ပိုမိုတင်းကျပ်တဲ့ခံစားချက်ကို ရရှိစေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတာက ခြေထောက်ပါ။
ခြေအိတ်မပါ၊ ခြေဗလာနဲ့ ဂျပန်ဖိနပ်ကိုစီးထားတယ်။ ဒါဟာ အေးတဲ့အချိန်ကာလပါ။
Boots ဖိနပ်ကိုတောင် ဝတ်ပေးလိုက်ချင်ပေမဲ့လည်း…
ဒီလိုကြည့်ပြန်တော့ အရောင်ကိုတွဲဖက်ပုံက ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ ဆင်တူသလိုပါပဲ..
အပေါ်ဆုံးကအထပ်၊ ယနေ့ခေတ်နဲ့ပြောရင် ကုတ်လိုမျိုးအရာမှာ အဆင်ရဲ့အရောင်ကို ပေါ်လွင်ဖို့အတွက် အောက်ခံအရောင်မှိန်တာမျိုးကို တွဲဖက်ထားပါတယ်။
ဒီမိန်းကလေးဟာ လက်ဖက်ရည်အရောင်ခံကုတ်အောက်မှာ အပြာရောင်တောက်တောက် ကီမိုနိုကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ အရောင်ဟပ်နေရုံသာမက၊ အပြာရောင်ကီမိုနိုကို ဦးစားပေးဖော်ပြချင်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း အတော်လေးလိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဒါဖြင့် အဲဒိုခေတ်က မိန်းမလှလေးတွေရဲ့ ဆောင်းရာသီအဝတ်အစား ဖက်ရှင်တွေကို ကြည့်လိုက်ပါ…
အအေးဒဏ်ကိုလည်း ကာကွယ်ရင်း၊ ဖက်ရှင်ကျစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
အဲဒိုအချိန်ကာလဟာ ဟောဒီလို အေးချမ်းသာယာတဲ့ခေတ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လည်း ဒီလိုယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖြတ်ခနဲမြင်ရတဲ့ အတွင်းခံလေးက sexy ကျတယ်။ ဒီလိုပြောတဲ့ပုံစံ ကီမိုနိုခေတ်မှာ ရှိခဲ့တာလား!?
အရှုံးပေါ်နေတဲ့ စားသောက်ဆိုင်၊ အမြတ်မရတာတောင် ဘာကြောင့်လုပ်နေရသလဲ ?!!!